Kenya oo sheegtay in howlgal oo ay ka fulliyeen gobolka Gedo ay ku dileen Cali Shangolow – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kenya oo sheegtay in howlgal oo ay ka fulliyeen gobolka Gedo ay ku dileen Cali Shangolow
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in howlgal duqeyn ah oo ay dhawaan ka fulliyeen gobolka Gedo ay ku dileen taliye ku-xigeenkii Al-shabaab u qaabilsanaa gobolkaasi Cali Shangolow iyo sidoo kale dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab.
Afhayeen u hadlay ciidamada Kenya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Helicopters-ka ah oo ay ciidamadooda leeyihiin ay duqeeyeen saldhigga Al-shabaab ee ku yaalla degaanka War-Gaduud oo u dhaw degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, halkaas oo ay sheegeen inay ku dileen daraasiin Al-shabaab ah.
Wuxuu afhayeenka Kenya u hadlay sheegay in duqeymo kale oo ay ciidamadooda ku bar-tilmaameedsadeen kooxaha Al-shabaab ay sidoo kale ku dileen tiro kale oo Al-shabaab ah, balse afhayeenkaasi ma sheegin tirada dad ee shacabka ah ee weerarkaasi ku dhintay.
Ma jirto wax hadal ah oo illaa iyo haatan kasoo baxay Xarakada Al-shabaab, kaas oo ay kaga jawaabayaan sheegashada Kenya ay ku sheegteen in sarkaal iyaga ka tirsan iyo dagaalyahanadooda lagu dilay duqeyn ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka Gedo.
Dowladda Kenya ayaa inta badan sheegata inay dishay tiro badan oo ka tirsan saraakiisha iyo dagaalyahanadda Al-shabaab, waxaana wararkaasi inta badan beeniya Xarakada Al-shabaab.